လူမှုရေးရှုံးနိမ့်မှု၏တိရိစ္ဆာန်စိတ်ကျရောဂါပုံစံသည် dopamine စနစ်၏ mesocortical ဒေသများတွင် orexin ပမာဏလျော့နည်းမှုနှင့် hypothalamus ရှိ dynorphin နှင့် orexin (2012) - Your Brain On Porn
neuroscience ။ 2012 သြဂုတ် 30; 218: 138-53 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroscience.2012.05.033 ။ EPub 2012 မေလ 22 ။
Nocjar ကို C1, Zhang က J ကို, Feng တို့က P, Panksepp J ကို.
Anhedonia လက်တွေ့စိတ်ကျရောဂါ၏အဓိကလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ preclinical စိတ်ကျရောဂါမော်ဒယ်များအတွက် anhedonia symptomology ်ပတ်သက်နေကြပြီနှစ်ခုဦးနှောက် neuropeptides dynorphin နှင့် orexin ပါ၏ အရာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic dopamine ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင်အာရုံစိုက်နေကြသည်။ ဤရွေ့ကား anhedonia လက္ခဏာအတွက်သူတို့အကြားတစ် ဦး အပြန်အလှန်ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆိုလို, တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားရဲ့ function ကို modulate ထိန်းညှိ neuropeptides ကိုထိခိုက်စေ။
ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှု anhedonic preclinical စိတ်ကျရောဂါမော်ဒယ်များအတွက် hypothalamus သို့မဟုတ် dopamine သည့်စနစ်အတွင်းပြုပြင်ထားသောသို့မဟုတ်ညီမျှမှုမရှိရှိမရှိသေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။
ကျနော်တို့စိတ်ကျရောဂါ၏ကြွက်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်မော်ဒယ်၌ဤဆုံးဖြတ်ရန် radioimmunoassay အသုံးပြုသော; anhedonic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်မထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တဲ့အခြိနျမှာ။ အဆိုပါ medial prefrontal cortex (mPFC) ၏တစ်သျှူးနမူနာ, ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်, Basal dynorphin အဆင့်ဆင့်ပုံမှန်တိရိစ္ဆာန်များဆင်တူဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် orexin အဆိုပါ VTA နှင့် mPFC အတွက်လျှော့ချခဲ့သည်.
ဒါ့အပြင် dynorphin နှင့် orexin နှစ်ဦးစလုံး Co-အမြန် dynorphin အားလုံးနီးပါး hypothalamic orexin ဆဲလ်တွေကတည်းကမှတ်သားဖွယ်သော hypothalamus အတွက်လျော့ပေးခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် orexin နှင့် dynorphin function ကိုစိတ်ကျရောဂါအတွက် hypothalamus နှင့် mesocortical dopaminergic ဦးနှောက်ဒေသများအကြားညီမျှမှုစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။